အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး | Page2| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ရင်သားကင်ဆာ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အစားအစာများ
30.4.2019 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ဘယ်အစားအစာက ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ အတိအကျတော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အာဟာရပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံပေးချက်တွေအရ အောက်ပါအစားအစာတွေကိုေ...
ပူလိုက် အေးလိုက်နဲ့ သွေးဆုံးကိုင်ချင်နေတာလား
29.4.2019 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
သွေးဆုံးကိုင်တယ်၊ သွေးဆုံးကိုင်တယ် မကြာခဏ ကြားဖူးကြမှာပေါ့။
အထူးသဖြင့် အသက် 45 နှစ်နှင့် 55 နှစ်အရွယ် အန်တီတို့ စကားဝိုင...
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ရှိ၊ မရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးကြမယ်
24.4.2019 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်နှုန်းတွေက မြင့်တက်လာပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပ...
ချစ်မဝတဲ့ သမီးလေးကို ယုံကြည်မှု ပြည့်ဝစေဖို့ ဒီလိုလေး ပြောပြပေးနော်
19.4.2019 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
♦ ပိန်မှ လှတာလာ? ၊ အရပ်ရှည်မှ ကြည့်ကောင်းမှာလား?
♦ အသားဖြူမှ ချစ်ခင်ကြမှာလား?
♦ ကိုယ့်ရဲ့ ပုံပန...
ကလေးမွေးပြီး ရာသီပြန်လာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေ
18.4.2019 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးမွေးပြီး ဘယ်လောက်ကြာရင် ရာသီပြန်ပေါ်မှာလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နည်းနည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
9.4.2019 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ရာသီအလွန်များပြီး ရက်ရှည်လာခြင်းကို ပုံမမှန် ရာသီသွေးဆင်းခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၁ ရက်၊ ၂ ရက်လောက် နည်းနည်းများတာလောက်ကို ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘ...
သင့်မှာ သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိလား
30.3.2019 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
သားအိမ်ကင်ဆာဟာ အဖြစ်များဆုံး အမျိုးသမီးကင်ဆာတွေထဲမှာ နံပါတ်လေးနေရာ လိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ သားအိမ်ကင်ဆာလို့ ဆိုလိုက်တိုင်း စိုးရိမ်စိတ်ပူစရာ အ...
မေမေတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ (** ကလေးလေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရတာ ပင်ပန်းလိုက်တာ ... ဒါဟာ ပုံမှန်မှ ဟုတ်ရဲ့လား **)
29.3.2019 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကျွန်မရဲ့ ပထမကလေးကို 2013 မှာ မွေးခဲ့ပါတယ်။ ကလေးက ပေါင်မပြည့်တာကလွဲပြီးတော့ တခြားဟာတွေ ပုံမှန်ပါပဲ။ ကလေးမွေးပြီး ၃ လအကြာမှာ ကျွန်မမှာ ထူး...